Oplamp Okpokoro Oriọna - Imewe Mmewe
Mọnde 11 Eprel 2022
Okpokoro Oriọna Oplamp gụnyere seramiiki na osisi siri ike nke etinyere isi mmalite ọkụ. N'ihi udi ya, nke enwetara site na njiko nke ato ato, aru nke oplamp nwere ike itughari ya na uzo ato di iche iche nke n’emeputa udiri oku di iche iche: oriọna di elu nke nwere oriọna, oriọna nke pere mpe n’enyu ambient, ma obu oriọna abuo. Nhazi ọ bụla nke cones oriọna ahụ na-enye ohere ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ọkụ nke ìhè iji soro ya na-emekọrịta ihe owuwu ụlọ. Oplamp ezubere ma rụọ ya kpamkpam na intali.
Aha oru ngo : Oplamp, Aha ndị na-emepụta ya : Sapiens Design Studio, Aha onye ahịa : Sapiens Design.
Okpokoro Oriọna Sapiens Design Studio Oplamp